मलमा सहकारीको अवैध धन्दा ! दीपशिखा सहकारीलाई कारबाहीको सिफारिस | चितवन पोष्ट दैनिक
मलमा सहकारीको अवैध धन्दा ! दीपशिखा सहकारीलाई कारबाहीको सिफारिस
रत्ननगर । सरकारले किसानलाई अनुदानमा बिक्री गर्न बजारमा पठाएको युरिया मलमा कालोबजारी गरेको पाइएपछि राप्तीको एक सहकारीलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले राप्ती नगरपालिकामा रहेको दीपशिखा कृषि सहकारी संस्थाले मलमा कालोबजारी गरेको पाइएपछि स्थानीय तह नगरपालिकालाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गर्दा सो सहकारीले युरिया मल प्रतिकिलो २५ रूपैयाँसम्म बिक्री गरेको र भारतीय अवैध मलसमेत बिक्री गरेको पाइएपछि कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको उनले बताए । सो सहकारीले अनुदानको मल बढी मूल्य लिएर बिक्री गरेको र ठूलो परिमाणमा भारतीय अवैध मल बिक्री गरेको पाइएको छ । ‘भारतबाट ल्याइएको मलको बिल बिजक छैन’, उनले भने दीपशिखाले अवैध धन्दा गरेको पाइयो ।’
कार्यालयले सो सहकारीको गोदामबाट २९६ बोरा मलसमेत जफत गरेको छ । सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत अनुदानमा किसानलाई उपलब्ध गराउने गरी युरिया मल बजारमा पठाउने गरेको छ । सहकारीमार्फत सो मल बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले प्रतिकिलो १५ रूपैयाँ ३० पैसामा सहकारीलाई बिक्री गरेको मल सहकारीले किसानलाई अधिकतम प्रतिकिलो २० रूपैयाँसम्म बेच्न पाउने नियम रहेको छ ।
दीपशिखाले एकैदिनमा विभिन्न मूल्यमा मल बिक्री गरेको पाइएको शर्माले बताए । ‘कुनै किसानलाई प्रतिकिलो २० रूपैयाँ र कुनै किसानलाई प्रतिकिलो २५ रूपैयाँमा समेत बिक्री गरेको पाइयो’, शर्माले भने, ‘त्यो सरासर कालोबजारी थियो त्यसैले मल जफत गरेर कारबाही सिफारिस गरेका छौँ ।’
भारतीय अवैध मल लुकाई छिपाई बढी मूल्य कायम गरी बेचेको गोप्य सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रशासकीय अधिकृत ईश्वर सिंखडासहितको टोलीले अनुगमन गरेको थियो ।
जफत गरिएको मल उचित मूल्य कायम गरी किसानलाई बिक्री गरी प्राप्त रकम सरकारी राजस्व दाखिल गरी सोको रसिद जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउन र सो सहकारी संस्थालाई कारबाही गर्न राप्ती नगरपलिकालाई निर्देशन दिइएको शर्माले बताए । मल अपचलन गरेको पाइएपछि सो सहकारीलाई १० हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
राप्ती नगरपालिकाकी मेयर प्रभा बरालले दीपशिखाले कालोबजारी गरेको विषय मिडियामार्फत जानकारी पाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आफूलाई आधिकारिकरुपमा जानकारी नआएको बताइन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जफत गरेको मल एक दुई दिनभित्र उचित मूल्य निर्धारण गरी किसानलाई बिक्री गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । अनुदानको मल बढी मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएपछि यसअघि रत्ननगर–१, बकुलहरमा रहेको निर्मल बहुउद्देश्यीय सहकारी–समेत कारबाहीमा परेको थियो ।
सो सहकारीको मल डिपोबाट जफत गरिएको ५१ बोरा मल रत्ननगर नगरपालिकाले प्रतिकिलो १५ रूपैयाँ ३० पैसामा किसानलाई बिक्री गरेको थियो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनबमोजिम नगरपालिकाले सहकारीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।